21-Sep-2020 to 14:11
S/Africa: Covid-19 ‘war not over’ – Minister
APA-Pretoria (South Africa) — South Africa on Monday moved to the Level One lockdown with eased restrictions in the fight against the coronavirus pandemic but the war against the disease “is not yet over,” Health Minister Zweli Mkhize has warned.
21-Sep-2020 to 13:54
S/Africa: Ramaphosa demands UN Security Council reforms
APA-Pretoria (South Africa) — As part of the United Nations’ overdue transformation, South African President Cyril Ramaphosa said on Monday that Africa needed to have a permanent seat on the Security Council as the world body celebrates its 75th anniversary this year.
21-Sep-2020 to 06:46
APA-Pretoria (South Africa) — A newly formed World Health Organisation body known as the African Expert Committee on Traditional Medicine for Covid-19 has endorsed a protocol for the third phase of clinical trials of herbal medicine aimed at treating the virus, the UN agency said on Sunday.
19-Sep-2020 to 09:41
S/African activists join Semenya's battle against IAAF ban
APA-Johannesburg (South Africa) — South African activists, despondent over a recent Swiss Supreme Court ruling to uphold a lower court ban of Olympian Caster Semenya from competing on the world stage, have vowed to solicit the help of the United Nations and the African Union to quash the decision.
18-Sep-2020 to 07:05
APA-Johannesburg (South Africa) — South Africa’s late human rights lawyer George Bizos was a man led by his “moral convictions and was on the right side of history,” President Cyril Ramaphosa said on Thursday.
17-Sep-2020 to 12:21
S/Africa: Opposition parties welcome easing of Covid-19 restrictions
APA-Johannesburg (South Africa) — South Africa’s opposition parties on Thursday welcomed the easing of the country’s coronavirus pandemic restrictions which take effect nationwide from next week.